Gandaki Sanchar » सचिवालयमा एक्लिए प्रधानमन्त्री !
सचिवालयमा एक्लिए प्रधानमन्त्री !
माघ १९, काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इच्छा विपरित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०बारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । आइतबार सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरुले जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको घोषणा गरेका थिए ।वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् । र, कार्यदललाई १० दिनको समय दिइएको छ ।
सचिवालयमा एक्लिए प्रधानमन्त्री
केन्द्रीय कमिटी अघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक बसेको थियो । स्रोतकाअनुसार ‘बैठक एमदमै राम्रो भयो, एमसीसीबारे अलिअलि कुरा आएछ । केहीले इज्जत धान्न पनि उठाउँछन्’ भन्दै प्रधानमन्त्री बैठक सुरु गरेका थिए ।
उनको प्रष्ट आशय एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरी निर्णय गरौं भन्ने थियो । तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले खण्डन गरे ।
बैठकमा करिव ८० प्रतिशतले एमसीसीबारे आलोचनात्मक धारणा राखेको भन्दै यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्नु वा बैठकमा उठेको मतलाई सम्बोधन नगर्नु घातक हुने धारणा राखेका छन् ।यसबारे थप अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने अधिकांश नेताको जोड थियो ।
त्यसपछि भने ओली ‘एमसीसी अस्वीकार गर्छौं भनेर निर्णय गरे भइहाल्यो, किन घुमाएर कुरा गर्नु पर्‍यो’ भन्दै कड्किएको एक नेताले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कम्युनिस्टहरुले सरकार चलाउन सक्दैनन् भन्ने प्रमाण हो यो समेत भन्नभुयो ।’
तर प्रचण्ड, नेपाल, खनालसँगै अरु नेताहरुले पनि हतारमा निर्णय गर्न नहुने धारणा राखे । स्रोतकाअनुसार एमसीसीबारे पारित गर्ने वा अस्वीकार गर्ने एक रोज्नुपर्ने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमै एक्लिएका छन् । एमसीसी पास गर्नुपर्ने मत राख्ने ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरुले समेत खुलेर साथ नदिएकोपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ल त ल ‘भन्दै अध्ययन कार्यदल गठन गर्न सहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यही सहमतिका आधारमा प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्ययन कार्यदल गठनको जानकारी गराएका हुन् । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने एमसीसीबारे निकट भविश्यमा टुंगो लगाउने बताए ।
के गर्छ कार्यदलले ?
कार्यदलका सदस्य रावलले एमसीसी, अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको दाबी गर्दै आएका छन् । अर्का सदस्य परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने त्यसको खण्डन गर्दै आएका छन् ।
नेताहरुकाअनुसार यो कार्यदलले सुरुमा एमसीसी सम्झौता र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका डकुमेन्टहरुको अध्ययन गर्नेछ र तथ्यहरु प्रष्ट्याउने काम गर्नेछ । त्यसपछि यसबारे के गर्ने भन्ने उपाय पनि पार्टीलाई सुझाउनेछ ।
नेकपा सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘पहिलो त यो कार्यदलले पार्टीमा भएको बहस निरर्थक होइन भन्ने प्रष्ट पर्नेछ । त्यसपछि यसमा संशोधन वा अर्को कुनै प्रस्ताव पास गरेर जाने कि कसरी जाने भनेर पार्टीलाई पनि उपाय सुभाउनेछ ।’अनलाईन खवरवाट सभार
प्रकाशित मिति १९ माघ २०७६, आईतवार १६:३४